Marwadda Madaxweynaha oo Baajisay Safar ay Burco ku Tegi Lahayd Iyo Xirsi iyo isbahaysigiisa oo ku xoogaystay Togdheer | Saxil News Network
Marwadda Madaxweynaha oo Baajisay Safar ay Burco ku Tegi Lahayd Iyo Xirsi iyo isbahaysigiisa oo ku xoogaystay Togdheer
Hargeysa ( SAXILNEWS/Yool)_Warar iyo xogo kala duwan oo Wargeyska Yool ka helay ilo rasmi ah oo uu dhuun-daloola dhaq-dhaqaaqyada qasriga Madaxtooyadda iyo hoggaanka Xisbiga KULMIYE, ayaa tibaaxay in la baajiyey safar Marwada Madaxweynaha Aamina Maxamuud Jirde (Aamina Weris) ku talo jirtay inay ku tagto Magaalada Burco ee Xaruunta Gobolka Togdheer Axadi Todobaadkan. Kaddib cabsi ka dhalatay xoggo la xidhiidha mudaharaad ka dhan ah Safarka marwada oo la sheegay in Magaalada Burco laga abaabulaayo. Ma jiro War si rasmi ah u xaqiijinaaya Safarka Marwada oo kasoo baxay qasriga Madaxtooyadda.
Hase-yeeshee, sida lagu xusay xoggaha Wargeysku helay, waxa qorshuhuu ahaa in Marwada Madaxweynuhu safar ku tagto agaalada Burco Axadi Todobaadkan, kaasoo sida la sheegay salka ku hayey in Marwadu soo dhagax dhigto dhisme cusub, oo aan iluhuu tibaaxin waxa mustaqbalka dhismahaas loogu talo galay. Waxa Wararku intaa ku dareen in safarkaas la baajiyey, kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Magaalada Burco laga abaabulaayo Mudaharaad lidku ah boqashada Marwada ee Gobolka iyo sidoo kale, joogitaanka Wasiirkii hore ee Madaxtooyada Xirsi Cali X Xasan ee Magaalada Burco, oo darreeno iyo muuqaalo sasleh ku dhaliyey Kuugta cusub ee Madaxtooyadda iyo hoggaanka Xisbiga KULMIYE.
Geesta kale, Warar isla amuurtan la xidhiidha xusen in Safarka Marwadu damacsanayd inay ku tagto Magaalada Burco uu ahaa mid ka dhashay soo jeedin Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi u gudbiyey Madaxweyne Siilaanyo, kaasoo sida iluhuu tibaaxen nuxur ahaan dulucdiisu ahayd darreeno shaki iyo walaac leh, oo Gudoomiye Muuse Biixi kaga dhashay Safarkii xubno isbahaysiga Musharraxnimadiisa diidani dhowaan ku tageen Gobolka Togdheer. Waxana xogguhu intaa ku darreen in Gudoomiyuhu soo jeedintiisa Madaxweynaha kaga dalbaday inuu lama huraan yahay Safar Madaxweynuhu inuu ku tago Magaalada Burco, si inta uu halkaa joogo kulamo taageero uu ugu raadinayo Musharraxnimada Muuse ula yeesho Odayaasha, Waxgaraadka iyo taageerayaasha KULMIYE ee barriga Burco.
Dhacdadan iskugu jirta walaaca iyo cabsida ee lasoo deristay Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE iyo Marwada Qaranka ayaa ah fallaadh kasoo dhacaysa riddo keliya oo ah Wasiirkii hore ee Madaxtooyadda, oo hadda u muuqda Nin Masalihiisi dhigtay Burco, isla markaana Bu’raashada u Biyeytay inuu Geed dheer iyo mid gaaban-ba u fuulo siduu u beenin laha hanka Madaxtimo ee Muuse Biixi iyo Mashxaraada gelbiskii Madaxtooyadda. Waxa kaloo, ifaafalaha sansaanka hadda muuqda iftiiminayaan in loollanka isbahaysiga kasoo hor-jeeda Musharraxnimada Muuse iyo Gudoomiyaha uu saldhiga dhanka Barrigu uu noqon doono GobolkaTogdheer, halka geesta galbeedkana sida la Hidaalinaayo uu noqon doono deegaano kamid ah Gobolka Gabilay.
Si kastaba ha ahaatee,Nin Quwaax hela, Nin iskaba qada iyo mid qardheer kora, waxa arriimuhu kala cadaan doonaan, kolka Fardo fuulka la gaadho, Raguna soo kala baxo. Waxana guusha iyo guul darada labada geesood bulshada u kala cadaan doontaa natiijada Doorashada haddii Ebo inagu simo.